Create your own Proxy server ! | TechSectors
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုဝင်တော်တော်များများ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကျော်ခွရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင် Proxy Sever တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ကိုဖိုးလပြည့်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်နောက်ကနေ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး ပေးသွားချင်ပါတယ်။ Technical Knowledge ဘာမှ သိဖို့ မလိုပါဘူး - ဟိုထည့်ဒီထည့် စာရိုက်တတ်ရင် ရပါပြီ။
တကယ်တော့ Proxy Sever တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ ထင်သလောက်ကြီး ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး - ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း သုံးနေကျ Google search ကိုသုံးပြီး ရှာလိုက်ရင် proxy servers တွေကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ သိပ်အသုံးတည့်တဲ့ PHP scripts တွေ အင်တာနက်ထဲမှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ခဏချင်းလဲ proxy servers တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက် တစ်ခု ရှိတာက PHP ပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ Proxies တွေဆိုတာ proxy scripts တွေကို host လုပ်ထားနိုင်ဖို့ web server တွေလိုအပ်ပြီး - ကိုယ့်ရဲ့ proxy site ကို အသက်သွင်းနိုင်ဖို့ အတွက် domain name တစ်ခုလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုမျိုးသာဆို ကျွန်တော်တို့မှာ Domain name တွေ Server space တွေ ရှိမနေဘူးဆို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ??
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အဲတာတွေ ရှိမနေလည်း ကိုယ်ပိုင် proxy server တစ်ခုကို Technical knowledge ဘာမှ သိထားစရာမလိုပဲ Free ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Google App Engine Free Proxy Server တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် အကြမ်းဖန်တီးထားတဲ့ proxy site လေးရှိပါတယ်။ အရင်ဆုံး စမ်းကြည့်ပါ။
သုံးလို့ ရတယ်ဆိုမှ အောက်က အဆင့်တွေကို ဆက်ဖတ်ပါ။ ကျွန်တော် သိထားသလောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျွန်တော့် အသိတွေရော - ကျန်တဲ့ တရုတ်တို့ ဘာတို့က အသိတွေလည်း ဒီ proxy လေးနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော် စမ်းသပ်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Proxy လေး အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် Proxy တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ စလိုက်ကြရအောင်ပါ။
ဒီအောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းဟာ Google App Engine ကို အသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်က မိသားစုဝင်များ မျှော်လင့်ထားသလောက် မခက်ခဲပဲ တော်တော်လေး လွယ်ကူတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ ပူးပေါင်း တည်ဆောက်ကြည့်ရင် သိလာပါလိမ့်မယ် -
အဆင့် ( ၁ ) : ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာ >> appengine.google.com ကိုသွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Google account တစ်ခုခုနဲ့ Sign-in လုပ်ပါ။
အဆင့် ( ၂ ) : အောက်ဖော်ပြပါ စာမျက်နှာကို ရောက်ရင် “Create an Application” button ကို click ပေးပါ။
ဒါဟာ ကျွန်တော် တို့အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် ဖန်တီးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Google ကနေ ကျွန်တော်တို့ဆီ verification code ကို SMS နဲ့ ပို့ပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mobile phone no ထည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမရှိလည်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး သူ့ဖုန်းဆီဝင်လာတဲ့ SMS ကနေ verification code ကို ပြန်ထည့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ :D အခု အရင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Mobile phone no ကို country code ခံပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ - မြန်မာနိုင်ငံဆို +95 .... စသဖြင့်
ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဖုန်းထဲကို ဝင်လာတဲ့ Google App Engine Code ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ box ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးရ ပါမယ်။
အဆင့် ( ၃ ) : အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း Application Identifier: မှာ မိမိနှစ်သက်ရာ sub-domain အမည်သစ် တစ် ခုခုကို ရိုက်သွင်းပြီး အဲ့ဒီ့ domain name ဟာ available ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ available မဖြစ်ရင် နောက်အမည် တစ်မျိုးကို ပြောင်းလဲရွေးချယ်ပြီး အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင် Google Terms တွေကို သဘောတူ လက်ခံပါကြောင်း check box မှာ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့နောက်မှာ Create Applications ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
ဖော်ပြပါ ပုံမှာ sub-domain အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ myanmarfamilyproxy ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ proxy application ရဲ့ App ID လို့ ဆိုရင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင် ပြောရရင် - ဥပမာ အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှာ တွေ့နေရတဲ့ myanmarfamilyproxy ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ App ID ပါပဲ။ အဲ့ဒီ့ နောက်မှာ အနီရောင်နဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ myanmarfamilyproxy ဆိုတဲ့ App ID ကို နောက်အဆင့်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက် Copy လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
အဆင့် ( ၄ ) : ဟုတ်ပါပြီ - ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Proxy server အတွက် လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ - အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နောက်ပြန်သွားပြီး Proxy server application တွေကို Google App Engine ဆီ Upload တင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါ့မယ်။ Python.org ရှိရာဆီ သွားပြီး ခုနောက်ဆုံးထွက် version ကို Download ချပါ။ ဒီနေရာကနေ >> Python 2.6.5 Windows installer download ချလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ( Linux နဲ့ Mac OS X သမားများ သက်ဆိုင်ရာ Site ထိ သွားရောက်ပြီး Download ချကြပါရန် )။ Download ရယူပြီးသွားရင် ပုံမှန်အတိုင်း Python ကို install လုပ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၅ ) : Python ကို installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီနေရာကို >> code.google.com သွားပြီး Python အတွက် Google App Engine SDK ကို Download ရယူပြီး install လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီနေရာကနေ >> GoogleAppEngine_1.3.4.msi Download ချလို့လည်း ရပါတယ်။ ( Linux နဲ့ Mac OS X သမားများ သက်ဆိုင်ရာ Site ထိ သွားရောက်ပြီး Download ချကြပါရန် )။
အဆင့် ( ၆ ) : ဒီနေရာက >> Zip file ကို Download ချပြီး extract လုပ်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ folder ကို desktop ပေါ်မှာ တင်ထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ့ Zip file ထဲမှာ transform_content.py ၊ mirror.py ၊ main.html ၊ index.yaml ၊ app.yaml ဆိုပြီး ဖိုင် ( ၅ ) ခု ပါဝင်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ( ရ ) : Desktop မှာ ရှိနေတဲ့ Google App Engine Launcher ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ပြောင်းလဲ ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ဖို့ Menu bar အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Edit ကနေ >> Preferences ကို သွားပါ။
နောက်ထပ် မြင်တွေ့ရတဲ့ box မှာ ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းရမယ့် ပုံစံကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါအတိုင်း Python Path, App Engine SDK နဲ့ Editor မှာ ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း လမ်းကြောင်းတွေ မှန်ကန်အောင် Select ကနေ ဖြည့်သွင်း ပေးပါ။ OK ကို click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၈ ) : နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း File ကနေ >> Add Existing Application ကို click ပေးပါ။
ပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ အဆင့် ( ၆ ) မှာ ဖြည်ချခဲ့တဲ့ Zip file ရှိရာဆီ Browse ကနေတဆင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ခေါ်ယူပါ့မယ်။ ပြီးရင် Add ကို click ပေးပါ။
အဲ့ဒီ့နောက်မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြအတိုင်း Edit button ကို click ပေးပါ။
“YOUR_APP_ID” နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အဆင့် ( ၃ ) မှာ မှတ်လာခဲ့တဲ့ App ID (sub-domain) ကို ဖြည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။ အဲ့နောက် File menu ကနေ Save လုပ်ပြီး Exit လိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၉ ) : အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့် အားလုံး လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Deploy ကို ကလစ်ပေးပါ။
ခုလိုမျိုး စာတွေ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ခဏ စောင့်နေပါ။
တစ်မိနစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက် နေရင် ပိတ်လို့ ရပါပြီ ဆိုတဲ့ စာ အဲ့ဒီ စာကြောင်းတွေ နေရာမှာ အစားထိုး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် Proxy ကို စသုံးလို့ ရပါပြီ။ Mozilla ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ url ကို ရိုက်ပြီး ခုလို စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။
HTML ကို ကျွမ်းကျင်ရင် ကျွမ်းကျင်သလို main.html မှာ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ထူးပြီး မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး - ဒီနေ့ တစ်နေကုန် အဲတာလုပ်လိုက် ဒီဘက်မှာ စာရေးလိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ လက်တွေလည်း တော်တော်ညောင်းနေပါပြီ။
Credits: ဒီ Proxy server ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် open-source web caching project >> Mirrorr ကို ဖန်တီးထားတဲ့ Brett Slatkin ရဲ့ Code ကို ယူငင် သုံးစွဲထားပါတယ်။
Update: ဒီ Proxy server အတွက် သိထားသင့်တာလေးတွေ ဆက်ပြီး ပြောပြသွားပါ့မယ်။
ခု ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ proxy ဟာ Flash videos အားလုံးကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ( ဥပမာ YouTube and ABC News ) ဒါပေမယ့် US မှာပဲ ကြည့်လို့ ရတဲ့ နာမည်ကြီး Hulu တို့ တော့ ကြည့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Proxy တစ်ခုတည်းကို လူတွေအများကြီး ဝိုင်းသုံးရင် “quota exceed” ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့် Proxy server လေးကို အမြတ်တနိုးနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ သုံးပါ။ သူများသုံးချင်ရင် သူ့ဘာသာသူ နောက်တစ်ခု လုပ်ပါစေ။ စေတနာကောင်းစွာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို မပေးပါနဲ့။
ဒီ Proxy ဟာ basic proxy server ဖြစ်တဲ့အတွက် logins ဝင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ( ဥပမာ - Gmail, Hotmail ) sites မျိုးတွေကို ဝင်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိသားစုဝင်တွေ နည်းလမ်း မသိသေးတဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဒီ ကျော်ခွရမယ့် ဆိုဒ်ကိုပဲ ဟိုလူ့မေးရ ဒီလူ့မေးရ - အသုံးတည့်ပြန်ရင် ရတနာ တစ်ပါးလို သိမ်းထားရ နဲ့ တော်တော်လေး ဒုက္ခများတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဘယ် ကျော်ခွဆိုဒ်မှ လိုက်မေးနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး - ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကြိုက် ကျော်ခွဆိုဒ်တွေ လိုသလောက် ဖန်တီးနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အဆင်ပြေသလို ခွနိုင်ပါပြီ။ :D
မှတ်ချက် - ဤ ကျော်ခွဆိုဒ် ဖန်တီးနည်းအား အသုံးပြု၍ Proxy server များ မဟားတရားဖန်တီးပြီး မဟုတ်တမ်းတရား ဆိုဒ်များ ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း ခွင့်မပြု - :D သတင်းရရှိပါက Myanmarfamily ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်း ခံရမည်။ :D